Antivirus Collections 2009 — MYSTERY ZILLION
October 2008 edited November 2009 in Antivirus & Virus
ZoneAlarm Internet Security 2009 (Fully compatible with Windows Vista and XP )
Zone Alarm Internet Security 2009 ကတော့ ယခင်ထုတ်ခဲ့တဲ့ version တွေထက် ပိုမိုပေါ့ပါးပြီး သုံးစွဲရတာ လွယ်ကူပါတယ်။ interface ကလည်း ခေတ်မီလာသလို လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကာကွယ်မှုတွေကလည်း ပိုမိုအဆင့်မြင့်လာပါတယ်။
ZoneAlarm Internet Security 2009 မှာ Web 2.0 ကို သုံး စွဲတဲ့အခါမှာ မှတ်သားတဲ့ tool တွေ မပါလာပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ပျက်စီးနေတဲ့ဖိုင်တွေ အတွက် Utilities လည်းမပါ၀င်ပါဘူး။ ZoneAlarm မှာ antivirus, antispam နဲ့ firewall ကာကွယ်မှုတွေကို ထည့်ပေးထားပါတယ်။ သို့သော်လည်း ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေများနေတဲ့ အချိန်မှာ Web 2.0 safe-browsing ကာကွယ်မှုကို ထည့်မထားပေးတာကတော့ ပြိုင်ဘက်တွေရဲ့ထိုးနှက်စရာပါ။ အင်တာနက်လုံခြုံရေး suite တွေမှာ Norton, McAfee နဲ့ Trend Micro တို့ ဟာလည်း အဓိကတိုးတက်မှုတွေ တိုးတက်လာပြီး ZoneAlarm Internet Security 2009 ကတော့ သုံးစွဲသူတွေရဲ့နှစ်သက်မှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပညာရှင်တွေ အမြင်အရတော့ ဆုချီးမြှင့်နိုင်လောက်တဲ့ အထိမကောင်းသေးဘူး လို့သိရပါတယ်။ ZoneAlarm ဟာ 44MB သာရှိပြီး Windows 2000, XP နဲ့ Vista တို့မှာသုံးစွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါ တယ်။ ၁၅ရက်လောက်အစမ်းပေးသုံးထားပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့၀ယ်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ZoneAlarm Internet Security 2009 မှာတော့ McAfee နဲ့ Norton တို့မှာမပါတဲ့ icon ဖြစ်တဲ့ uninstall icon ကို All program စာရင်းမှာတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Uninstall လုပ်ကြည့်တဲ့အ ခါမှာ ချောမွေ့ပြီးတော ့လျင်မြန်ပါတယ်။ Zone labs server နဲ့ ဆက်သွယ်မှုကို ဖျက်ပြစ်လိုက်ပြီး application ကိုဖယ်ရှားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Registry မှာမကျန် ရစ်ခဲ့သလို folder အဖြစ်လည်း မကျန်ခဲ့ပါတယ်။ McAfee, Norton နဲ့ Trend Micro တို့မှာတော့ ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။
ZoneAlarm Internet Security 2009 ရဲ့ Interface အသစ်ဟာ ရိုးရှင်းသလို ရှုပ်ထွေးမှုလည်း နည်းပါးလှပါတယ်။ ယခင် version အဟောင်းထက် ပိုမို ကောင်းမွန်ပြီး ခေတ်မှီမှုလည်းရှိပါတယ်။ စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်လို့ရတာဟာလည်း နှစ်သက်စရာဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသော ပရိုဂရမ်တွေကို configuration ပြုလုပ်ရတာလည်း မခက်ခဲလှပါဘူး။
ZoneAlarm Internet Security 2009 မှာပါတဲ့ Security tool တွေဟာ လုံခြုံအောင် လုပ်ပေးရုံသာမကအွန်လိုင်းပေါ်မှာ ရှာဖွေလေ့လာမှုတွေ ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်တွေကို လုံခြုံအောင် ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ Boot ပြုလုပ်တဲ့အချိန်ကလည်း ပြီးခဲ့တဲ့ version ထက်ပိုမိုပြီး မြန်ဆန်ပါတယ်။ Kaspersky Anti-Virus အင်ဂျင်လို သီးခြား Anti-Virus တွေသုံးပြီး scan လုပ်လို့လည်းရသလို သီးခြား anti- spyware တွေကိုလည်း သုံးစွဲလို့ရပါတယ်။ Spam ကာကွယ်မှုအတွက် SonicWall ကို ထည့်ပေးထားပါတယ်။ game mode ပါ၀င်တဲ့အတွက် အွန်လိုင်းဂိမ်းတွေကိုက စားနေတဲ့အခါမှာတောင် လုံခြုံရေး အတွက် နောက်ကွယ်က ပြုလုပ်ပေးနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Zone Alarm ကကွန်ပျူတာကို လာရောက်သုံးစွဲနေတဲ့ အခြားသူ ရှိနေရင် သတိပေးမှာဖြစ်ပြီး Block လုပ်ချင်လျှင် လုပ်နိုင်အောင်ကူညီ ပေးပါတယ်။ ပြီးတော့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို log တွေပြုလုပ်ပြီး မှတ်သားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Zone Alarm မှာ Parental Control Feature ကို ဘယ်ဘက် ခြမ်းရှိသလောက် ကော်လံမှာဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကို မကြည့်စေချင်တဲ့ Website တွေနဲ့မရောက်စေချင်တဲ့ e-mail တွေကို စစ်ယူပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ZoneAlarm Sutie မှာ Antiphishing ကာကွယ်မှုကို ထည့်မပေးထားပါဘူး။
Antivirus ကာကွယ်မှုအတွက်တော့ ZoneAlarm ဟာ Kaspersky နဲ့တွဲပြီး လုပ်ကိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ZoneAlarm Anti-Virus 2009 မှာတွေ့ရတဲ့ ရမှတ်တွေ အတိုင်းဘဲ Antivirus ကာကွယ်မှုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ AntiSpyware အတွက်တော့ ZoneAlarm Pro7မှာတုန်းက တော့ Spyware ၃၀ရာခိုင်နှုန်းကို စစ်ဆေးဖယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ 2009 အတွက် antispyware ကတော့သီးသန့်ထွက်ပေါ်မလာသေး ပါဘူး။
Kaspersky Anti-Virus 2009 with all new working keys (25-oct-2008)
Kaspersky Lab ကနေ ဖြန့် ချိလိုက်တဲ့ Anti-Virus 2009 အတွင်း ကွန်ပျူတာကို အန္တရာယ် ပြုနိုင်တဲ့ ပရိုဂရမ်တွေကို အလျင်အမြန်စစ်ဆေး ဖော်ထုတ်ပေးနိုင်မယ့် anti-malicious software engine ပါရှိလာပြီး ဆော့ဖ်၀ဲတွေရဲ့ အားနည်းချက်ကို စစ်ဆေးဖော် ထုတ်ပေးနိုင်မယ့် Secunia rulnerability database နဲ့ built-in system restore လုပ်ဆောင်ချက်တွေထည့်ပေးတားတာ ကြောင့် အသုံးပြုသူတွေ သဘောကျနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
Kaspersky Anti-Virus ဆော့ဖ်၀ဲတွေဟာ ကမ္ဘာ့အကောင်း ဆုံး ပရိုဂရမ်တွေအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရတာကြောင့် စွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်းမှာ အထူးပြောစရာ မလိုပေမယ့် ဒီ Kaspersky Anti- Kaspersky Anti-Virus 2009 Virus 2009 ကတော့ သူ့အရင် ထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့ version တွေလို မျိုး တအံ့တသြ ဖြစ်စရာ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို မတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ Application နဲ့ boot-up time စမ်းသပ်မှုတွေမှာဆိုရင် ပြီးခဲ့တဲ့ version မှာထက် ပိုမိုနှေးကွေးနေတာ ကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် antimalicious software engine က ပိုမိုတိုးတက်လာပြီး file scan စမ်းသပ်မှုတွေမှာ ပိုမိုမြန်ဆန်လာတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီ Kaspersky Anti-Virus 2009 ဟာ ကွန်ပျူတာကို အန္တရာယ်ပြု နိုင်မယ့် malicious ပရိုဂရမ်တွေ ကို စစ်ဆေးနိုင်မှုအပိုင်းမှာ အထူး ကောင်းမွန်ပေမယ့် အသုံးပြုလုပ် ဆောင်ရတဲ့အပိုင်းမှာတော့ အဆင် မပြေမှုတချို့ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ပရိုဂရမ်ကို စမ်းသပ် install လုပ်ကြည့်ရာမှာ အခက်အခဲတချို့ ကြုံခဲ့ရပြီး interface က အနည်းငယ် ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အပြင် update နဲ့ scan ပြုလုပ်အပြီးမှာဖော်ပြတဲ့ message တွေကလည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိ တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒီ KAV 2009 ကို Windows XP ကွန်ပျူတာအတွင်း install လုပ်တဲ့အခါ ZoneAlarm firewall နဲ့ AVG 8.0 တို့ကိုဖယ်ရှား ပေးဖို့ တောင်းဆိုတာကိုတွေ့ရပါ တယ်။ အမှန်မှာ AVG 8.0 ကို uninstall ပြုလုပ်ပြီးသားဖြစ်ပေ မယ့် registry ဖိုင်တွေ ကျန်ရှိနေဆဲ ဖြစ်တာသာဖြစ်ပါတယ်။ Install။ ပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက် Windows ရဲ့ Firewall ကနေ Kaspersky ကို မသိဘဲ block လုပ်ရမလားဆိုပြီး မေးမြန်းလာတဲ့ အပြင် product code ကို ရိုက်ထည့်ပြီး register လုပ်ရာမှာလည်း အဆင်မပြေဖြစ် ခဲ့ရပါတယ်။ ပရိုဂရမ်ကို ကွန်ပျူတာထဲကနေ အပြီးတိုင် ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပစ်လိုရင်တော့ Start menu ထဲရှိ All Program ရှိ Remove ကို နှိပ်ပြီး uninstall ပြုလုပ်နိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီ uninstall လုပ်ဆောင်ချက်ဟာ ပရိုဂရမ် နဲ့ ပတ်သက်သမျှ အလုံးစုံကိုဖယ် ရှားပေးနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ တခြား antivirus ဆော့ဖ်၀ဲတွေလိုမျိုးပဲ registry ထဲမှာ entry တွေ ကျန်နေခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ Kaspersky ကတော့ အခုလိုဖြစ်ရခြင်းဟာ မိုက္ကရိုဆော့ဖ်ရဲ့ uninstaller အားနည်းချက်ကြောင့်လို့ အပြစ်ဖို့ထားပါတယ်။ ပရိုဂရမ်ရဲ့ interface က သိပ်ပြီး ဆွဲဆောင်မှုမကောင်းတဲ့အပြင် စကရင်တစ်ခုချင်းစီမှာလည်း Kaspersky Internet Security 2009 က ကွန်ပျူတာကို ပိုမိုအကာ အကွယ်ပြုနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း သတိပေးချက်တွေ ပေါ်ထွက်လာ တတ်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီ interface အတွင်း ပထမဆုံးတွေ့ ရမှာကတော့ အနီရောင်သတိပေး ချက်ဖြစ်ပြီး အများအားဖြင့်တော့ Fix Now ကို ကလစ်လုပ်လိုက်တဲ့ အခါ update လုပ်ဖို့ပဲလိုနေတာမျိုး တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ပရိုဂရမ် က automatic update က ရှင်း လင်းပြီး ရာခိုင်နှုန်းမည်မျှရောက်ရှိနေပြီ စတာကိုပါ တွေ့မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာကို quick scan ပြုလုပ်ကြည့်ရာမှာ ပြီးစီး သွားပြီးနောက် ရလဒ်ကို ဖော်ပြ မပေးဘဲ scan ပြုလုပ်မယ့် စကရင်စီ ပြန်ရောက်သွားတာကို တွေ့ရပါ တယ်။ ဒီလို scan လုပ်ထားတဲ့ ရလဒ်ကို သိရှိနိုင်ဖို့အတွက်က တော့ report button ကို နှိပ်ပေး ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တခြား လုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာလည်း ဒီလိုမျိုးပဲ ရလဒ်ကို တိုက်ရိုက်ဖော် ပြပေးခြင်းမရှိဘဲ စကရင်ပေါ်က button တွေကို နှိပ်လိုက်မှသာ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Kaspersky Anti-Virus 2009 အတွင်း ဖိုင်နဲ့ memory ကို စစ်ဆေးပေးနိုင်မယ့်လုပ်ဆောင်ချက်၊ e-mail နဲ့ instant message တို့ကနေ ဗိုင်းရပ်စ်၀င်ရောက် လာမှုကို ကာကွယ်ပေးမယ့်လုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ Web traffic ကို စောင့်ကြည့်ပေးမယ့်လုပ်ဆောင်ချက် တို့ ပါရှိလာတဲ့အပြင် တခြားအပို လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလည်း ထည့်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ Malicious ပရိုဂရမ်တွေကနေ ကွန်ပျူတာအတွင်းရှိ systemိ ဖိုင် တွေကို ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာ ကွန်ပျူတာကို မူလအတိုင်း ပြန်လည်လုပ်ဆောင်နိုင်စေမယ့် Rescue Disk တစ်ခုဖန်တီးထား နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို Windows XP rescue disk ကို ဖန်တီးဖို့အတွက်ကတော့ Windows XP SP2 စီဒီရှိထားရမှာဖြစ် ပါတယ်။ ပရိုဂရမ်ရဲ့ Security Analyzer က Secunia ရဲ့ database ကို အသုံးပြုကာ ဆော့ဖ်၀ဲတွေရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို စစ်ဆေးဖော်ထုတ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့စမ်းသပ် ကြည့်ခဲ့တဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ ဆော့ဖ်၀ဲ အားနည်းချက် ၄၈၁ ခု တွေ့ရှိခဲ့ရ ကာ ဒီအားနည်းချက်တွေကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် link တစ်ခုစီကနေ လိုအပ်တဲ့ update သစ်တွေကို လိုက်ပြီး download ပြုလုပ်ခဲ့ရပါ တယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ဟာ ဆော့ဖ်၀ဲတွေရဲ့ဘယ် version ကို အသုံးပြုနေတယ်ဆိုတာ ဖော်ပြမပေးနိုင်တာကြောင့် လိုအပ်တဲ့ update ကို ရှာဖွေရတာကလည်း အတော်ကြီး လက်၀င်တာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Kaspersky Anti-Virus 2009 ဟာ ဗိုင်းရပ်စ်ကို စစ်ဆေးဖော်ထုတ်ပေးနိုင်မှုအပိုင်းမှာ ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိပြီး file scanး စမ်းသပ်မှုမှာ မြန်ဆန်ပေမယ့် တခြား စမ်းသပ်မှုတွေမှာတော့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ထုတ် version ထက်နှေးကွေးနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ iTunes စမ်းသပ်မှုမှာ ၂၇၅ စက္ကန့် ကြာခဲ့ပြီး Microsoft Office စမ်း သပ်မှုမှာ ၁၅၈၄ စက္ကန့်ကြာခဲ့ကာ older အလိုက် scan လုပ် စမ်း သပ်ကြည့်ရာမှာတော့ ၂၅၆ စက္ကန့် ရှိခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ Bootup speed မှာတော့ ၃၃.၈၄ စက္ကန့်ရှိခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ AV-Comparatives.org ရဲ့ စမ်းသပ်မှုရလဒ်တွေအရ Kaspersky Anti-Virus7ဟာ ondemand scan ပြုလုပ်တဲ့အခါဗိုင်း ရပ်စ် ၉၈ ရာခိုင်နှုန်းကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး Advanced+ သတ်မှတ်ခံခဲ့ရကာ Retrospective/ Proactive စမ်းသပ်မှုမှာ Advance အဆင့်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရ တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ တခြား anti-virus ဆော့ဖ်၀ဲတွေနဲ့နှိုင်းစာတဲ့ အခါ Kaspersky ဟာ ဗိုင်းရပ်စ်မဟုတ်တဲ့ ဖိုင်တွေကို ဗိုင်း ရပ်စ်အဖြစ် မှားယွင်းသတ်မှတ်မိတဲ့ နှုန်းအနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့အကြောင်း တွေ့ရပါတယ်။ Kaspersky Anti-Virus 2009 အတွင်း content-Sensitive help ဖိုင်ပါ၀င်လာတာ ကြောင့် မိမိလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို အလွယ် တကူ ရှာဖွေဖတ်ရှုနိုင်မယ့်အပြင် online FAQ နဲ့ Knowledge bage့ ၀က်ဘ်ဆိုက်ကိုသုံးပြီးလည်း ပရိုဂရမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ရှင်းလင်း ချက်တွေကို ရှာဖွေဖတ်ရှုနိုင်မှာ ဖြစ် ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကုမ္ပဏီက ပညာရှင်တွေဆီ e-mail က တစ်ဆင့် ဒါမှမဟုတ် တယ်လီဖုန်းကနေ တစ်ဆင့် အခက်အခဲတွေပြဿနာ ရပ်တွေကို မေးမြန်းနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခြုံပြီးသုံး သပ်ရရင်တော့ Kaspersky Anti-Virus 2009 ဟာ interface ရှုပ်ထွေးမှုကြောင့် အသုံးပြုရာမှာအဆင်မပြေမှုတချို့ ကြုံခဲ့ရပေမယ့် anti-malicious software engine ကို ပိုမိုတိုးတက် ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပေးထား ခြင်းနဲ့ tool သစ်တွေ ထပ်မံဖြည့် စွက်ပေးထားခြင်းတို့ကြောင့် မိမိရဲ့ ကွန်ပျူတာကို ပြင်ပက တိုက်ခိုက် မှုတွေကနေအကာ အကွယ်ပြု ထားဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ ထိပ်တန်း ဆော့ဖ်၀ဲသစ်တစ်ခု အဖြစ်သတ် မှတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
21 New Keys :
Password For Keys(rar) : mechodownload
Kaspersky Internet Security with license key - 300 days
Kaspersky 2009 вЂ“ the backbone of your PCвЂ™s security system, offering protection fromarange of IT threats. Kaspersky Anti-Virus 2009 provides the basic tools needed to protect your PC.
Kaspersky Internet Security 2009 вЂ“ the all-in-one security solution that offersaworry-free computing environment for you and your family. Kaspersky Internet Security 2009 has everything you need forasafe and secure Internet experience.
Kaspersky Internet Security 8.0 вЂ“ isanew line of Kaspersky Labs products, which is designed for the multi-tiered protection of personal computers. This product is based on in-house protection components, which are based on variety of technologies for maximum levels of user protection regardless of technical competencies. This product utilizes several technologies, which were jointly developed by Kaspersky Labs and other companies; part of them is implemented via online-services.
During product preparation several competitor offerings were considered and analyzed - firewalls, security suites systems, which position themselves as proactive in defence and HIPS systems. Combination of in-hosue innovative developments and results from analysis gathered through the industry allowed to jump ontoanew level of protection for personal users, whereby offering even more hardened and less annoying computer protection from all types of electronic threats вЂ“ malicious programs of different types, hacker attacks, spam mailings, program-root kits, phishing emails, advertisement popup windows etc.
o access to the userвЂ™s resources and data is restricted for unknown applications
Kaspersky Rescue Disk 2009 8.0.0.454
All English Win Bart Pe disk.
Fresh ultra fast live Rescue CD!!!
safe way to remove viruses fromacomputer without the risk of getting infected.
Remember.This does not mean that you have to had Kaspersky installed on your Pc.Use your favorite IS and have this in the case of emergancy!!!
Kaspersky Rescue Disk ,abootable Kaspersky Antivirus to perform virus scanning and remove viruses on Windows without booting the operating system first.
Using Kaspersky rescue disk to remove anti virus consider the most safety way without risking your computer OS getting infected again.
Kaspersky Rescue Disk able remove known viruses, trojans, worms and other malicious software similar like Desktop Kaspersky antivirus.
Plus more, any computer with CD rom can perform kaspersky rescue disk to scan their computer hard disk which itвЂ™s totally independent from the installed operating system. However, kaspersky Rescue Disk has limitation or disadvantage which the virus definitions cannot be updated. This mean any kaspersky virus definition update require to download full boot disk and burned to CD again.
McAfee 2009 detects when youвЂ™re in full-screen mode and postpones security alerts or notices. So you can work, play or watch movies without interruption.
Size: 102.13 Mb [+3%]
AVG Antivirus Pro 8.0.138 + Serial
Trial.Reset crack for x86 (32bit) windows:
Mirror for Norton Antivirus 2009
Norton Antivirus 2009 uses very small memory of system.
It improves performance of windows slowly.
Decrease the Boot time of Windows.
В· 100% protection against any threats via USB drive
В· The best solution to protect offline computer
В· The world's fastest and smallest antivirus software
В· Require no signature updates
В· 100% compatible with all software
Microsoft Windows Live OneCare isacomprehensive and integrated PC health service that helps protect and maintain your computer with antivirus, firewall, PC maintenance, and file backup and restore functionality.
Kaspersky Key Finder 1.5.1
This application is designed to accessadatabase hosted online and list over hundreds of keys offered to you for almost every week (there is Over 800 Keys working in the database, and always growing). There is no need any more to search the web for the latest keys. All you have to do from now on is start this application, click on list the keys from the database and select the keys that are valid for your software version, select one of the FIVE servers (mirros) you need to download from then click to download it in seconds (No more Rapidshare to wait or Online to search) Download directly from the database which is updated every week with more keys.
1- Now Windows Vista Compatible.
ESET Nod32 Antivirus Business Edition PRECRACKED - 24596 days
Built on the award-winning ThreatSenseВ® engine, ESET NOD32 Antivirus software proactively detects and eliminates
more viruses, trojans, worms, adware, spyware, phishing, rootkits and other Internet threats than any program
available. It's the ideal antivirus for Windows XP, and also runs smoothly on Windows legacy systems, MS-DOS,
file servers, mail servers, and more. No matter what your system, there is no better antivirus protection.
ESET NOD32 Antivirus was awarded the "BEST Antivirus Solution" in 2006 and 2007 by AV-Comparatives. Compare
antivirus solutions here to learn more, or check out the latest virus bulletin.
from testing labs and is recognized for having zero false positives.
Panda Antivirus featuresanew UltraFast scan engine, 30% faster than its predecessors, Panda\_вЂ™s exclusive SmartClean technology, which not only disinfects viruses but also restores system settings damaged by the latest trojan horse technologies, and its low use of system resources.
Coupled withanew best-of-breed truly automatic update system which takes advantage of your Internet connection to transparently update the virus signature files incrementally and its new innovative ease of use interface, Panda Antivirus is the first truly \_вЂќinstall-and-forget\_вЂќ antivirus for the home user.\_вЂќ
Here are some key features of \_вЂќPanda Antivirus Pro\_вЂќ:
В· Protection against spyware. Protects your privacy by preventing spyware from being installed on your computer. The anti-spyware protection prevents this type of software from compiling data about your Internet habits and preferences.
В· Protection against unknown threats. Thanks to the revolutionary TruPrevent Technologies now, more than ever, you will be protected against malware at all times.
В· Protection against all types of malware. Not only are you protected against viruses. Now you have integrated protection capable of combating all types of malicious software: hacking tools, jokes, malicious cookies, viruses, etc.
В· Firewall. Neutralizes network viruses and prevents possible intrusions or attacks by hackers trying to enter your computer through the Internet.
В· Protection against vulnerabilities. Protects you against security holes in certain applications that could make your computer easy prey to all types of malicious software and hackers. Now you can fix vulnerabilities detected in your computer, giving you even greater security.
В· Services. Enjoy the wide range of services that we offer. Now you haveawhole team of IT security experts to help you resolve any queries that could arise. In addition, on our Web page, you can access the latest versions of our products and all the information you need.
В· Processor: Pentium 300 MHz or faster.
В· RAM: 128 MB without TruPrevent, 512 MB with TruPrevent (1 GB recommended).
В· Hard disk: 265 MB free space.
В· MS Internet Explorer 6.0
В· CD-ROM drive
Free User နဲ့ download လုပ်တာ Your IP Address: is already downloading ဆိုပြီး ERROR ဘဲတက်တက်လာတယ်...........ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ :39::39:
what is (21 new keys) zip file password?
smileface wrote: »
All- in -one kaspersky 2009 + keys
Kaspersky Internet Security 8.0.0.357 Emerg. Bootable CD w. Defin. ISO
Kaspersky Mobile Antivirus 6.0 + Security 7
Kaspersky Anti-Virus Remover 2009
KEYS LAST UPDATE 13-07-2008
Kaspersky Keys for KIS & KAV | 100% Working After6November Blacklist!
KIS/KAV SETUPS TOO | LARGEST SET OF KEYS COLLECTION | UPDATED Oct 30, 2008
Kaspersky က ဆာဗာ ဗားရှင်းအတွက် ကီးလေးနဲ့တကွ မရှိဘူးလားဗျ... လိုချင်လို့.. :5:
Confidently download, share and open files from friends, family, co-workers вЂ“ and even total strangers!
* Schedules and limits kidsвЂ™ access to Internet and to applications
Kaspersky Anti Virus For Windows Server 6.0.3.837 with key
Full with Antivirus
System Mechanic v7.5.3 Professional + SERIAL
(Istein's favorite for system cleaner)
System MechanicВ®7Professional is five complete products in one integrated package: everything you need to keep your PC safe, fast, and error-free.
More than just Internet security, System MechanicВ®7Professional isacomplete solution for PC protection, system optimization, and trouble-free maintenance.
You need more than just security software to keep your PC running right. Without regular internal maintenance even the best protected PC will suffer problems and eventually grind toahalt. System MechanicВ®7Professional contains all of the tools you need to defend against threats, and also keep your PC running smooth, fast, and healthy from the inside out.
Trusted by millions worldwide, System MechanicВ® Professional setsanew standard for total PC security and optimization in one integrated package.
* iolo AntiVirusв„ў - protect against viruses, worms, trojans, and other threats
* iolo Personal Firewallв„ў - protect against hackers, Internet intruders, and other unwanted communication
* Search and Recoverв„ў4- recover deleted files, photos, email, and more from any drive or media
* DriveScrubberВ®3- securely erase data from your hard drive
SpyBot - Search And Destroy 1.6.0.30 Final!!
Norton Ghost Recovery Disc v14.0
вЂў Full system backup and restore
вЂў File and folder backups
вЂў Event-based backups
вЂў Advanced compression and encryption
вЂў Full system backup (disk image)вЂ”Backs up your hard drive or partition.
вЂў File and folder backupвЂ”Backs up only the specific files and folders you choose rather than saving an entire drive.
вЂў File backup searchвЂ”Finds and backs up specified file types such as photos, MP3 files, and documents.
вЂў Incremental and differential backupвЂ”Backs up only files that have changed.
вЂў Customisable, event-based backupвЂ”Triggers backups based on key events such as new program installations or sudden increases in data storage.
вЂў NEW!: FTP backupвЂ”Copies recovery points toaFTP site for easier offsite backup management.
вЂў NEW!: Offsite backupвЂ”backs up your files to network-attached storage devices.
вЂў NEW!: Symantec ThreatCon integrationвЂ”Leverages intelligence from SymantecвЂ™s industry-leading security research organisation by triggering incremental backups whenever ThreatCon reachesaspecified threat level.
вЂў Advanced compression and encryptionвЂ”Minimises storage space and helps keep sensitive documents safe.
вЂў System protectionвЂ”Recovers your system and data even when you canвЂ™t restart the operating system.
вЂў EXCLUSIVE!: Google Desktopв„ў integrationвЂ”Makes data recovery even faster with searchable backup indexes.
вЂў LightsOut RestoreвЂ”Restores your system with an on-disk software recovery environmentвЂ”no bootable CD required.
вЂў FAT16, FAT16X, FAT32, FAT32X
вЂў Dynamic Disks
вЂў Linux® EXT2/3 and Linux Swap Partitions
Symantec norton 360 all in one version 2.0
* Network Monitoring protects your home network against unauthorized access by detecting whether your connected wireless network is secure or not secure, providing you withavisual picture of your network and each device that is connected to it and letвЂ™s you view the security status of the Norton protected computers on the network
Kaspersky Kis Kav 7-8-9
Changes in Version 4.22.1014, 11/17/2008:
* New in-product graphics/logo
* Technology additions to the scanning engine - new definitions being created to take advantage of this new format - this will GREATLY increase detection for new threats
* Resolved issue with NVidia Drivers (improved real-time protection)
* Reduced time taken by real-time protection drastically
* Enhanced DDA (Direct Disk Access) to handle malware that blocks volume access
အဲသည် Key တွေက blacklist တွေဖြစ်ကုန်ပြီ။
အခြား keys တွေ အများကြီးရှိတယ်လေ နာ့ဘော်ဘော်ကြီးရဲ့။ အပေါ်ဘက်မှာ တချက် ရှာကြည့်လိုက်နော်။ Istein တောင် အခုထိ OK နေတုန်းပဲ။
Please try these links too.
MZ..မှာ ခင်ဗျား post တွေကိုကျေနပ်မှုတွေနဲ့ဖတ်နေကြတဲ့လူတွေ..အမျုားကြီးပါ..
kav ka black list ဖြစ်သွားရော...
အဲဒါ..ဒီမှာတွေ့လို့.....download ဆွဲမယ်ဆိုပြီး....open လုပ်လိုက်တာ...Access denied တဲ့..
ပြီးတော့....Avast ကလည်း..Rapid Share မှာ...ဆိုတော့ရသေးဘူး
Preminium User ကဲ့သို့...ဆိုတာစမ်းနေတုန်း...
Johnson wrote: »
Star Lay ရဲ. " kaspersky7ကိုblacklistedမဖြစ်အောင် " Thread ကိုသွားကြည့်လိုက်ပါဦး။
Black ကြီးလဲ List နိုင်တော့မယ်မထင်ပါ ... ):)):))
ဒီ link ပါ >>> http://www.mysteryzillion.org/forums/showthread.php?t=823
Kaspersky Keys-*WORKING KEYS*
အစ်ကိုရေ အဲဒီမှာ အပေါ်က ကောင်ကို down လိုက်ရင် error ပဲ ပြနေတယ်။ အဲဒါ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ နည်းလေးပေးပါဦးဗျာ။
mm.Zarmani wrote: »
တောင်း၇န်နေ၇ာကနေသွားတောင်းလိုက်ပါလားဗျာ။မော်မော်တွေမင်မင်တွေနဲ့ မန်ဘာတွေကူညီပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ်တခြားဟာပြောင်းသုံးပါ့လားဗျာ။ အမ်ဇက်မှာ ဖ၇ီးဒေါင်းလို့၇တဲ့ ဆော့၀ဲလင့်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် down လိုက်တိုင်း 15%, 16%, 17% လောက်မှာ ရပ်ရပ်သွားတယ်။
ဆက် down လို့မရတော့ဘူး။ download manager လဲ မနိုင်တော့ဘူး။ ကျွန်တော့်ဆီက ကွန်မကောင်းလို့ထင်ပါ့။
Spyware Doctor Key လိုချင်လို့ပါ.. ရှိရင် Share ပေးကြပါခင်ဗျာ
version6ရနိုင်ရင်ပိုကောင်းပါမယ်
Spyware Doctor with Anti-Virus 6.0.0.385 + Serial + Resetter
Spyware Doctorв„ў provides three-way spyware protection for your PC through real-time threat blocking, advanced system scanning and immunization against known browser infections. Spyware Doctor isamulti-award winning spyware removal utility that detects, removes and protects your PC from thousands of potential spyware, adware, Trojans, keyloggers, spybots and tracking threats. Protect your privacy and computing habits from prying eyes and virtual trespassers with the help of Spyware Doctor.
Anti-virus software and firewalls do not fully protect your system against the majority of spyware and privacy threats. Because spyware is commonly bundled with software downloads, attached to e-mails, or transmitted through networks it can appear to be legitimate software, but once installed it can be nearly impossible to detect and remove without the help ofadedicated spyware removal tool like Spyware Doctor.Spyware Doctor has consistently been awarded EditorsвЂ™ Choice, by leading PC magazines and testing laboratories around the world, including United States, United Kingdom, Sweden, Germany and Australia. All current versions of Spyware Doctor have won EditorsвЂ™ Choice awards from PC Magazine in United States. In addition, after leading the market in 2005, Spyware Doctor was awarded the prestigious Best of the Year at the end of 2005.
WhatвЂ™s New in Spyware Doctor 6.0 :
вЂў Latest protection from unknown threats
вЂў Improved detection capabilities:
вЂў Swift clean-up for heavily infected computers:
- Spyware Doctor is able to detect and remove threats on heavily infected computers faster and easier than ever before. Sometimes your computer is so highly infected that you may find yourself unable to install or run security software except when in the вЂsafe modeвЂ™ of Windows.
вЂў Improved Hacker Defense :
- Further improvements have been included to enhance our own defense against malware threats attempting to interfere with the effectiveness of Spyware Doctor . Our hacker defense system means you can rest assured that your computer system has the most comprehensive protection while ensuring that malware threats donвЂ™t impede on the functionality or effectiveness of Spyware Doctor.
вЂў Other enhancements:
o The real-time protection module is now referred to as Intelli GuardВ®
Spyware Doctor 6.0 designed for Windows Vistaв„ў, XP and 2000 .
ကျွန်တော်တော့မသုံးဖူးဘူး အကို ့အတွက်ရှာပေးတာပါ ဟိုလူတစ်ယောက်ပြောသလိုပေါ့
ကျေးဇူးမတင်ချင်နေပါ ဖင်တော့လှန်မပြပါနဲ ့ဘာလို ့လဲဆိုတော့ စိတ်မထိန်းနိုင်လို ့ပါတဲ ့(မှတ်ချက်။
ဒေါသဖြစ်လို ့နော် တစ်မျိုးမထင်နဲ ့ဦး):5::5:
တောင်းရန်နေရာကို သွားတာ ကျွန်တော်ပေးမယ်နော် ဆိုတယ့် နေရာပဲ ရောက်ရောက်သွားလို့
server edition အတွက် ဘယ်ဟာ ဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခု ရရင် ဖြစ်ပါတယ်။ synamtec က update လုပ်လို့ မရတော့ဘူး။ သုံးပုံ နှစ်ပုံလောက်ရောက်ရင် server fail ဆိုပြီး ရပ်သွားတယ်လေ။ အဆင်ပြေရင် တစ်ခုလောက် လမ်းညွှန်ပေးပါလားဗျာ။ ငဗိုင်းကိုက်တာကတော့ တော်တော်ကိုက်နေပြီ။
နောက်ဆုံးထွက် version နော်
ဒေါင်းရတာ အဆင်ပြေမှာပါ ကျွန်တော်တော့မသုံးဖူးဘူး ရှာရင်းနဲ ့တွေ ့ထားလို ့
ကျွန်တော.စက်မှာ virus ကိုက်နေလို. antivirus software တွေကို install လုပ်လို.ရတယ် restart ချလိုက်ရင် ပြန်တတ်လာရင် don't sent ဆိုပြီးပြ နေ တယ် antivirus က လည်း အလုပ် မလုပ်တော.ဘူးဗျ ကူညီကျပါဦး
details လေးကို ပြောပါအုံးဗျ